Karda fitahirizam-bokatra China boaty fitehirizana taratasy vita amin'ny atin'akanjo mpanamboatra sy mpamatsy | Huaguang
baoritra fitahirizana taratasy boaty volon'ondry akanjo ba
Boaty fitehirizana sary
Size: 31 * 31 * 15cm
Efa zatra mametraka ny atin'akanjo na ba kiritsika ao anaty vatasarihana, saingy mora ny manapotika azy ireo. Ny boaty fitehirizana dia mora kokoa ny manasokajy, mora mandamina, ary madio kokoa mba hitazomana ny atin'akanjo sy ba kiraro. Na izany aza, ny boaty fitahirizana taratasy eny an-tsena dia feno zavatra mahafinaritra eo imasony, misafidy boaty tena mety dia tena zava-dehibe, raha tsy izany dia mety tsy misy fanampiana, na vao mainka tsy milamina aza. akanjo mila boaty fitahirizana taratasy.
Alohan'ny hividiananao dia mila mahafantatra ianao:
1. Ny habetsaky ny atin'akanjo anananao ary ny isan'ireo boaty azonao ampidirina ao anaty vatasarihana.
Raha toa ka avo kokoa noho ny isan'ny takelaka ny akanjo anatiny, inona no hataonao amin'ny fihoaram-pefy?
2. Azonao aforeto ny atin'akanjonao sy ny ba kirarinao rehefa avy nanasa ianao, ary nametraka atin'akanjo iray na ba kiraro iray tao anaty kady? Ny ankamaroan'ny olona dia tsy aforitra atin'akanjo sy ba kiraro…
Ny boaty fitehirizana taratasy sasany dia tsy mety amin'ny ankamaroan'ny olona, ​​rehefa dinihina tokoa, manana atin'akanjo sy ba kiraro mihoatra ny eritreretintsika isika!
Ary ny boaty fitehirizana dia mitaky habaka, ny vatasarihana dia tsy afaka nametraka ireto atin'akanjo ireto, misy boaty fitahirizana dia fotsiny ho an'ny fitahirizanao nanampy fanivaivana ho an'ny ratra!
Raha tsy hainao ny mamoritra atin'akanjo na ba kiraro dia tsara kokoa ny mividy iray amin'ireo boaty fitehirizana taratasy ireo. Drafitra roa no misy azy io ary misy toerana anatiny lehibe. Azonao atao ny mametraka azy ao anaty ny akanjo anatiny raha tianao, ary avy eo mametraka ny ba kiraronao amin'ny iray hafa. Ny tena zava-dehibe dia tsy mila mandany fotoana mandamina ny underwea sy ny ba kiraro ianao. Ampidiro fotsiny izy ireo, dia ho hitanao hoe aiza no ahitana azy ireo rehefa mila azy ireo ianao.
Kitapo fonosana vy, milamina kokoa ary mateza kokoa.
Teo aloha: Mpamatsy boaty fitehirizana entana madinidinika ao China - mpanonta vokatra vaovao lafo vidy vita pirinty matihanina fanodinam-bolo vita amin'ny glossy fanomezana foana - Huaguang
Manaraka: Kitapo vita amin'ny voninkazo azo zakaina azo zakaina ho an'ny sipa
Boaty fanomezana mainty
Fanaterana boaty fanomezana
Boaty fitehirizana volondavenona